SomaliTalk.com » 2011 » December » 12
Home » Archive Maalinta December 12th, 2011
Aroos:Ilaahay kuwii isku waara haydinka dhigo.
waxaan halkaan tahniyad aroos uga diraynaa Arooska iyo aroosada Mudane Ahmed Huruuse Hashi iyo Jamiilo Abdirahman Mohamud oo aqalgalkoodu kadhacay Magalaada Galkacyo taariikhdu marka ay ahayd 11/12/2011. waxaa tahniyada Diraya dadka kala ah:- 1.Mohamed Ahmed Afeey 2.Abdikarim Abdulahi Ducale 3.Asad Abdul Shire 4.Mohamed Adam Jama 5.Khadar Mohamed Baraag 6.Mohamed Adan Geele 7.Mohamed Farax Caynab 8.Abdisamed...
In ka ba dan Boqol Xildhibaan oo ka tirsan Mudanayasha Baarlamanka ayaa waxa ay u ololey nayaan qabsoomidda Shir ay isugu imaanayaan Xildhibaanada ka soo hor jeeda Guddoomiyaha Barlamanka Federaalka KMG Soomaaliya. Xildhibaanadan oo maalmihii u dambeeyayba shirar gooni gooni ah ku yeelanayay Hotelka Weheliye ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ay hore u shaaciyeen in maalinimada Talaadada ah ay si rasmi...
Iyadoo weli ay socdaan gurmadka la gaarsiinayo dadka ku dhibaatoobay Abaaraha iyo Colaadaha ayaa Hay’addaha Humanitarian African Relief Organization (HARO) oo kaashaneysa Hayadda World Assembly Of Muslim Youth (WAMY) ayaa deeq noocyo kala duwan ah gaarsiisey dadka Barakacayaal ah oo ku nool Kaamka Kalluunka ee degmada Wadajir ee Gobolka Banaadir. Ilaa 550 qoys ayaa ka faa’iideystay qaybinta deeqdaasi...
Kulankan loo bixiyey(Rajada soomaaliya)oo wejigiisii labad lagu qabtay dalka talyaaniga waxuu ahaa kulan ay isugu yimaadeen marti sharaf aad u fara badan oo ka kala timid daafaha aduunka kazoo ay marti galisay dawlada talyaanigu. Madasha lagu qabtay kulankan oo ahayd madal aad u qurux badan agaasinkeeduna ahaa mid aad u heer sareeyey waxaa marti habeenkaas ku ahaa Raysalwasaarihii hore ee soomaaliya...